Citizen Coalition for Change official, Felix Mafa Sibanda, has claimed that Mashonaland Central Province has abandoned the ruling ZANU PF after some of President Emmerson Mnangagwa’s children and relatives allegedly invaded gold mines in the province.
Sibanda claims that the mines were a source of income for local residents and some gold panners who have as a result of the alleged invasion vowed not to associate in any manner with the first family in any way.
Bulawayo24 reports that gold panners who were pioneers in Mukaradzi Gold Fields were unilaterally removed by police and the army to pave way for the first family operations. The publication cites Sibanda as saying:
It would appear that Zanu PF in and outside Mt Darwin and Mashonaland Central province have abandoned the once-formidable political party, Zanu PF in the entire province and are joining overwhelmingly the CCC movement.
Some Zanu PF political commissars have abandoned the Zanu PF gravy train and this has fractured ED and his dying party from the core. Ordinary people and some political conscious ones in Mashonaland Central province are calling for CCC to move in fast and cause its structures for operational excellence.
Mashonaland Central province has for years been regarded as ZANU PF’s stronghold despite being shaken in 2017 by factional disputes pitting President-elect Emmerson Mnangagwa’s triumphant Team Lacoste against their G40 rivals who were once rooting for former President Robert Mugabe to remain state leader.
regai vatorerwe ma mines ndivo vairova vanhu.vasingazivi kuti zanu Haina brain yava kuva ma-mira.
XP 1 month ago
ZANU PF haiko
Pindula is good sure
KU ma shonaland central vatora zve
mavaona kaaa vanhu vaye Dira rizare hako 🥃🍾 vote for CCC
ZANU ishiri, ende shiri inozongofa